Ukuvakatyezwa kweKholeji yoBusuku bokuSukuma: Kutheni ufuna ukwenza enye, Yintoni ongayilindela
by UMargaret Barthel
Jonga ngokugqithiseleyo kwi-Night Night Kuhlala kwiKholeji yaseKholeji
Ukuhlala kobusuku kunokubaluleka kuwe ekufumaneni inkcubeko yekholeji yangempela efihliweyo emva kweencwadana eziluhlaza kunye nezivakalisi ezikhuthazayo. Isixhobo esibalulekileyo ekuncedeni ukhetha ikholejini eligqibeleleyo . Nantsi kutheni kufanele ushiye isidleke uze uchithe ubusuku ekholejini.
1. Uya kudibanisa nabaFundi beeNje abaSebenze ukuVunywa
Izikhokelo zoKhenketho, iimikhosi zobusuku, kwaye nabani na onobunye abaxhomekeke kwi-Admissions bafike khona ngenxa yokuba bayayithanda isikolo sabo kwaye bafuna ukusasaza igama, kwaye banokuba bathambekele kancinci ukuthetha ngokunyanisekileyo malunga nekholeji oya kuyo.
Oko akuthethi ukuba abayinyaniso: mhlawumbi iikholeji iyinto efanelekileyo kubo, ngoko ke abanakho ukuhlaselwa kwezinto ezininzi. Kodwa, ngaphambi kokuba wenze isigqibo sakho (nokuba ukuthumela isicelo okanye ukuthumela kwidiphozithi yakho yokuqala), yinjongo efanelekileyo yokuba nomqondo olinganiselayo wesikolo.
Lucky kuwe, ukuba wenza uhambo lokuhamba ngobusuku, uya kufika kumhlobo wakho womninimzi, ohlala naye, kwaye uqhube. Abayi kuba yiyona ndlela yintlobo enkulu yentshiseko ye-cheerleader xa kuthethwa ukuthetha ngeekholeji zabo. Le yithuba lakho lokubuza abafundi abaye bangenxalenye ye-Admissions operation malunga nezinto abazifunayo nento abangayithandiyo ngamava ekholejini.
2. Uza kubona I-Campus efana nobusuku boveki
Uza kuchitha ii-weeknights ezingaphezulu kweeveki zeeveki kwiikholeji. Ukutyelela ngokubambisa ithuba elihle lokufumanisa ukuba ziphi na iimbasa zasekholejini oya kutyelela.
Uza kufumana iimpendulo zemibuzo enokukunceda ukuba ulinganise uhlobo luni lomsebenzi wobhalansi bokuba ngabafundi banamhlanje. "Ngaba abantu baxhama kunye kunye?" "Ngaba bafunda ngokukhawuleza okanye baqhubekile okanye bangabi nhlobo na?" "Ziziphi iintlobo zeziganeko (izithethi, ukwenza umsebenzi, ukuphononongwa, iintlanganiso zebhulaki) zenzeke kwiimpawu zangeveki?" Unako nethuba elihle lokutyelela ebusuku ukubuza imibuzo yangoku-msebenzi yomsebenzi, oko kukuthi "zingaphi iiyure ozijwayele ukufunda ngazo ngeeveki?
ngeempela-veki? "Kuyavunywa, ubuninzi bomsebenzi bavama ukunyuka ngamaxesha athile kwi-semester, kodwa kusekuhle ukuxelela ukuba bonke babukeka bevela emva kweencwadi ezinkulu zeencwadi zamathala eencwadi kwaye bakuxelele ngezwi eliqhaqhakazileyo elingenakuzonwabisa .
3. Uya kwiiKlasi, Ngezinye izihlandlo kunye neMikhosi Yakho
Unakho ukuya kwiiklasi kwiikholeji ezininzi ngaphandle kokwenza uhambo lokuhamba ebusuku, kodwa kuzo zonke izinto oza kuhlaselwa ngaphandle, ukuba unokuvakasha ebusuku, unethuba lokuhamba nomngane wakho okanye umngane wakho kumfundi eklasini (okanye unokwenza ngokwakho, kunjalo).
I-Perk 1: xa ukhetha iiklasi ukuya kutyelela, unokufumana umkhosi wakho nabanye ukuba baqikelele kumaprofesa abo abazithandayo okanye izifundo ukuze ubone okusemgangathweni ekufundiseni kwikholeji.
I-Perk 2: xa uhleli nabafundi bamanje, banokukubonisa izinto zabo zeklasi ukuze ungalahlekanga ngokupheleleyo, kwaye xa konke kwenziwe, banokukunika uluvo oluchanekileyo lo titshala xa kuthelekiswa nabanye abaprofesa ndibe neli sebe.
I-Perk 3: uya kuziva nje ngokusemthethweni xa uphantsi kwephiko lomfundi wamanje. (Gcina ukhumbule ukuba izifundo zeekholeji zihluke kakhulu kwi-schoo l ephezulu ).
4. Uya kudla kwiHolo lokutya ejikelezwe ngabaFundi beeNje
Iikholeji ziyahluka malunga nokuba zivumelekile ukuba iindwendwe zihambe kwiikholo zazo zokudlela. Ngokwenza ukutyelela ubusuku bonke, uqinisekisiwe ukuba udle oko abafundi abakhoyo badla, kwaye nangona kunjalo, uya kuyidla nabo. Ukutya isidlo emva komhla omde weeklasi yindlela enhle yokubona amaninzi abafundi abakhoyo ngokusebenzisana, kwaye ukuba ucele inkatho kunye nemibuzo emininzi yabahlobo bakho.
5. Uya kuhlala kwiiDorms for Night
Uninzi lwezikhenkethi zekampus zibandakanya ukutyelela kwigumbi lokulala, kodwa ngamanye amaxesha ukuvakaliswa kuyakunqumla kwaye kuthumela iindwendwe kwi-dorm esitsha ngokukhawuleza, ehlotshisiwe ngokuqhelekileyo. Ukutyelela ebusuku kukufumana ithuba elifanelekileyo lokubona ukuba uhlala phi kwi-dorm ejwayelekile-kwaye ucele umphathi wakho kunye nabahlobo bakhe malunga neemeko zezindlu kwikholejini.
Kwakhona kuncedo ukujonga indlela abantu abahlala ngayo kumgangatho ofanayo. Ngaba bayamomotheka kwaye baxoxe kwiiholo? Okanye kucacile ukuba iidumba ziphela nje indawo yokulala? Kwaye kubaluleke kakhulu, yintoni oyithandayo?
6. Unako ukuza kwiintlanganiso zeClaw okanye ezinye iiklasi zeMicimbi
Izinto ezininzi zenzeke kwiikholeji zeeklasi kwiiveki zeeveki, ezifana neentlanganiso zeeklabhu, iintetho, iintsebenzo, ukuvuleka kwezemidlalo, imidlalo yezemvelo, ukuqhuba umsebenzi. Xa unomncedisi wakho, cela imibuzo malunga nezinto ezenzeka ngalolo busuku, kwaye ukuba nantoni na ukuxabisa, qaphela ukuba unokulungiselela ukuba uhambe. Nokuba ngaba umncedisi wakho akaqhelekanga ukuya kwintlanganiso yintlangano yakho oyithandayo okanye akakwazi ukuya kwinkqubela ofuna ukuyibona, banokufumana omnye wabo nabahlobo ababandakanyekayo okanye abakhululekile, okanye unokuhamba nawe . Ngenye indlela, umphathi wakho unokufumana intlanganiso / intsebenzo / inkulumo efunekayo ukuya kuyo, kwaye nangona ungaqinisekanga ukuba yikhobe yakho yeeyi, akuyona into embi ukuyibeka kunye - into enokumangalisa yona.
7. Unokuhlangabezana nekamva lakho kwiklasi
Ngaba ulala ebusuku ngexesha leprogram ye-campus, njengokuba uvume iveki yabafundi okanye i-spring preview? Ukwazi abanye abadala abakhulileyo abanomdla okanye abaye bavunyelwa kwisikolo esifanayo njengoko unokuba ngamava okonwabileyo. Lithuba elihle lokudibana nabantu abanomdla kwizinto ezifanayo kunye nokwenza ukuba ngubani omele abe kwiklasi engenayo Emva kokuba uqhuba ibhola lemibuzo eqikelelweyo, "Liliphi igama lakho?
Uvelaphi? Kuphi enye into oyisebenzisayo? Ufuna ukufunda ntoni? Ziziphi iimfuno zakho? "Unokuhlala phantsi, uxoxe, kwaye uye kwiivenkile kunye nomngane wakho omncinane. Ngubani owaziyo? Mhlawumbi uya kugcina umva kwi-campus efanayo ufike ngoSeptemba kwaye unokubuyisela kwakhona kwakhona.
8. Unokwenza Unobungozi Olungcono Kokuzicingela Ngayo
Kubantu abaninzi, ukugqiba apho bafuna ukuya khona kwiikholeji bonke behla ukuya kufanelekileyo, oko kukuthi okanye ingaba ikholeji inokudibana nenkqubo yezemfundo, amathuba okwenziwa kwamanye amaxesha, inkxaso yendawo, indawo kunye nesimo senhlalakahle abafuna ngayo. Eminye yale mibahluko kulula ukuyifumana - tyelela iwebsite yekholejini okanye uthathe uhambo lwe-campus kwaye uya kufumana uluhlu lokuhlamba iiprogram zeekholeji kunye nezokuhlala, ulwazi malunga nendawo yalo, kunye nekhathalogu yemibutho yabantwana. Kodwa ukukhwela iwebhu kwaye nokuba uthathe utyelelo ngeke kukuncede ukuba ufumane ingxoxo yendidi kwindawo yomdla wakho wemfundo, kwaye ayiyi kukuxelela indlela ufikelela ngayo ngokuhlwa ngokusemgangathweni kunye nabahlobo dorms. Ngaphantsi kwayo yonke, oko kukubaluleka kwangempela kokwenza uhambo lokuhamba ebusuku: uya kuba neentsuku zobomi kwiikholeji oyicingayo, oko kuthetha ukuba uya kulungeleka ngakumbi ukucinga ngokuchanekileyo uchitha iminyaka emine elandelayo yobomi bakho apho.
Yintoni enokuyilindela ngexesha loKhenketho lokuSukuma kweKholeji
Unokuba ukhangele phambili ukutyelela ebusuku, okanye ukwesaba. Abanye abafundi bacinga ukuba abazali babo bahlasela ukuwayeka ngenxa yeli jongene naloo kholeji abakucingayo.
Nantsi ikholeji yokutyelela ekuboniseni ukuba inokuba yintlungu kwaye inelungelo.
Iintlanganiso: I-Part-Awkward-But-Still-Part Fun
Emuva kwimini emva kokuhambela umhla ngosuku, ufika kwi-Ofisi ye-Admissions kwaye ukhangele kunye nabamkeli, kwaye udibana nomkhokeli wakho wekhenkethi kunye ne-night host host. Umncedi wakho mhlawumbi umbalwa nje emdala kunani.
Umncedi wakho mhlawumbi uye wafika emva kwexesha ukuya phambili emsebenzini wesikolo kwaye uhlambulula igumbi lokulala apho ulala khona phantsi kwantambama ebusuku. Umncedisi wakho uyakubonisa wena nomzali wakho kwaye uchaze ukuba uza kuphelisa ngobusuku bakho malunga nexesha lesidlo sakusasa.
Uza kuphuma kwi-Ofisi ye-Admissions kwaye uxoxe ngokufutshane malunga nohambo lwakho ukuya kwi-campus kwaye nokuba awukho apha ngaphambili. Umncedisi wakho uya kudlala uhambo lwekhokelo xa uhamba phakathi kwekampus.
Uza kufika ehostlwini yokuhlala uze ufike phezulu kwigumbi. Uza kufaka isikhwama sakho kwaye ngoku uqala ingxoxo yakho yokuqala yangempela kunye nomphathi wakho. Umbuzo wokuqala uya kuba nokuba ungayithandi uhambo olusesikweni, oluthile lomntu wekampus ngaphambi kokutya. Eli lixesha lokwazi omnye nomnye. Lindela imibuzo eninzi malunga neemfuno zakho zemfundo, izinto ozenzayo zokuzonwabisa, kunye nesikolo sakho esiphakeme; unethemba lokuba uya kundibuza imibuzo eninzi malunga namaziko emfundo, amaxesha angaphandle kunye noluntu kwikholeji enokuyiqwalasela.
Leli xesha lokuba ucele ummkeli wakho imibuzo ejabulisayo (Kutheni uyayithanda apha? Yintoni eyona nto imemori yakho engcono kakhulu?) Kodwa kunye nobunzima (Yintoni na isikhalazo sakho esikhulu malunga neeklasi? apha ngoLwesihlanu ubusuku? Ngaba abantu bagweba-y?). Cela umphathi wakho izinto ozoyibuza ukuba zibuze kwenye indawo.
Ngohlwayi: I-Part-Good-Good-Fun Fun Part
Mhlawumbi uza kufumana izihlobo zabamkeli bakho kwindlu yokuhlala njengexesha lokutya. Uya kuhamba onke ehholo lokudlela, apho ufunda ukuba ubomi bekholeji bujikeleza ngokutya kwaye akukho nto enye. Uya kudla kunye nomphathi wakho kunye nabahlobo bakhe. Unokufunda amagama abo, amajelo, kunye nezinye izibalo ezibalulekileyo zeekholeji ezifana nokuba kutheni bakhetha isi sikolo.
Ukutya isidlo kukufumana ithuba lokubona uluntu lwasekholeji ekusebenzeni kwaye ugcine amanye amaqela, uxoxe ngeetafile zawo ukuze uxoxe ngeposi emva kokudliwayo, mhlawumbi ukucinga ukuba wenze oko kanye ngonyaka. Mamela oko bathethayo; phu laphule xa bekhalaza. Uya kufumana ingcinga yakho yangaphakathi ekufihla izinto ezincinci.
Ngobunye ubusuku, unokukhetha.
Ikhethi A: Ummkeli wakho ufuna ixesha lokufunda. Uya elayibrari / kwikampus cafe / igumbi lokufundela / igumbi legumbi lokuhlala ukusebenzela ixesha elithile.
Ikhetho B: Yiya kwintsebenzo, intlangano yentlanganiso, intetho okanye omnye umcimbi wekampus.
Ikhethi C: Hlalani kwaye nixhomeke okanye nibukele ibhayisikobho okanye niphumele kwi-intanethi nabahlobo.
Emva kweenketho A, B, okanye C, mhlawumbi uya kuhamba ngedolophu, mhlawumbi hamba i-ice cream kwidolophu efunekayo yasekolishi idityaniswe. Emva koko ubuya, cwangcisa i-mattress yakho yomoya, uhlambulule amazinyo, uphenduke ubusuku.
Ekuseni: I-Nerd-tastic Fun Part
Ngokwenza okokuza kunyaka ozayo kunye nomntu ohlala naye, wena kunye nomncedisi wakho kufuneka uxoxisane ngokukhenkceza, ukuhlambalaza nokuguqula iimpahla. Uza kuthatha isidlo sakusasa ngokukhawuleza uze uhambe ukuya kwiklasi. Unokuba ukhethe ukuhamba nomphathi wakho kwiklasi yokuqala okanye uthathe omnye wabahlobo phezu kwesibonelelo sabo sokukuhambisa kwiklasi yabo yasekuseni, okanye usenokuba unqwenele ukuzenzela wena.
Ukuba uya eklasini ngokwakho, nceda uzixelele kwiprofesa ngaphambili. Uza kuba nethuba lokuthetha nomntu oyinyaniso, uprofesa wekholeji kwindawo efunayo. Ngaphezu koko, abayi kubuza ukuba ngubani umntu omtsha ongenangqamaniso eklasini yabo okanye abiza kuwe ukuba uphendule.
Emva kweklasi, uya kudibana kunye nomphathi wakho kwaye uye ekudleni. Unokubuza imibuzo yakho yokugqibela enzima. Emva koko uza kuqokelela isikhwama sakho kwigumbi uze uphinde ufike kwi-Admissions Office. Ummkeli wakho uya kuba nethemba lokuba ujabule ukuhlala kwakho kwaye akuxelele ukuba uthumele i-imeyili okanye umbhalo xa unemibuzo eminye.
Yenza Uninzi lweeKholeji
5 Imibuzo Yokubuza I-Guide Yakho Yokutyelela I-Campus
Ikholeji encinci okanye iYunivesithi enkulu
Iikholeji ze-Boston kunye neeYunivesithi
Uludwe lweZikolo zoLuntu ze-Free Online kwi-Illinois Students, K-12
Iindlela ze-Bass Tournament E-Georgia
Iifama eziLimo eziLimileyo kunye neeAnbiotics, iiHormones, iRBGH
Ibhere elifutshane elibhekiselele kwi-Bear (Arctodus Simus)
Indlela Yokujonga Ingxube Yakho Yokuxuba
I-Shabbat Morning Service yamaYuda
Ngaba Ndifanele ndifumane iSigqibo seDktri?
Iintetho ezili-10 eziphezulu zoTitshala beSayensi
I-Senioritis kunye neeKholeji zeeKholeji
Drew University GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Abafazi kwi-Peace Corps - Ukudlwengula, ukuhlaselwa ngokwesondo kwi Peace Corps
Kutheni iibhetri zeLithium zifumana umlilo